အင်တာနက်သုံးရင်း တစ်နေ့ကို $160 ရမည့် Online ငွေရှာနည်းပါ ~ ဗိုလ်လှိုင်း (ဆိပ်ဖြူသားလေး)
Home » အွန်လိုင်းငွေရှာနည်းများ » အင်တာနက်သုံးရင်း တစ်နေ့ကို $160 ရမည့် Online ငွေရှာနည်းပါ
အင်တာနက်သုံးရင်း တစ်နေ့ကို $160 ရမည့် Online ငွေရှာနည်းပါ
Thursday, April 24, 2014 အွန်လိုင်းငွေရှာနည်းများ
ကဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး ကျွန်တော် ပေးထားတဲ့ လင့်ကနေ Register လုပ်လိုက်ပါ
Register လုပ်တဲ့နေရာရောက်ရင် Username , Passwords , Email , Birth Year တို့မှာ မိမိအသုံးပြုမယ့်လိပ်စာတွေဖြည့်ပါ..ပြီးတာနဲ့ Referrer မှာUsername ကနာမည်ဘဲပြန်ဖြည့်ပြီး အောက်မှာပေးထားတဲ့ လုံခြုံရေးကုဒ်ကိုဖြည့်ကာ Create My Account ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Email အတည်ပြုချက်တောင်းတဲ့ Page ကိုရောက်သွားပါမယ်.. Email ထဲကိုသွားပြီး Verifiedလုပ်လိုက်တာနဲ့ မိမိအကောင့်ဟာ စတင်အသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။
အခုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ရမှာက သူ့ဆိုဒ်မှာ တင်ထားတဲ့ ကြော်ငြာတွကို ကလစ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် သူ့ရဲ့ကြော်ငြာတွကိုကလစ်ပေးချင်းအားဖြစ် ပုံမှန်ငွေရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်. Account ထဲဝင်လိုက်ပါ
အကောက်ထဲ ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် My Account ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ အောက်က ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း တွေရပါမည် ။
အခုကျနော် နမူနာပြထားတဲ့ Main Balance ထဲမှာ $ 0.1730 ဆိုပြီးကြော်ငြာတွေကို ကလစ်လို့ရထားတဲ့ ငွေအချို့ကို
တွေ့ရပါလိမ့်မယ်. ပုံမယ်ပြထားတာက ကျနော် ကလစ်နေတာ သုံးရက်လောက်ရှိပါပြီ..အခုမှစလုပ်တဲ့သူတွေကတော့
အဲလောက်တောင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး အနည်းဆုံး $ 0.0856 လောက်ပဲရပါလိမ့်မယ်..
ပြီးရင် My Account ရဲ့ညာဘက်ဘေးက
View Ads ကိုကြည့်လိုက်ပါ..အဲဒီမှာ ရောင်စုံလေးတွေနဲ့ ဂဏန်းတွေပြထား တာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်..ဥပမာ အောက်က
View Ads မှာ74 လေးပြထားပါတယ်..ဒါဆိုရင် ကနေ့ Click လုပ်ရမယ့် ကြော်ငြာအရေအတွက်က ၁၁ ခုလို့မှတ်ရပါမယ် ..အိုကေ.. အဲဒီ View Ads ကို Click နှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်ကပုံအတိုင်း တွေ့ရပါမယ် .
အကုန်ကလစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် My Account ကို နှိပ်လိုက်ပါ Main Balance ထဲကိုကြည့်လိုက်ပါ ကိုယ်ကလစ်လို့ရထားတဲ့
ကြော်ငြာတွေကို ကလစ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ 24 နာရီပြည့်မှ ကြော်ငြာတွေကို ကလစ်ဖို့ အရေအတွက်အသစ်ထပ်
ထုတ်ပေးသွားပါတယ်..ဥပမာ ကနေ့ ကျနော် မနက်ကိုးနာရီက ကလစ် လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် နောက်နေ့ မနက်ကိုးနာရီ
လောက်မှ ပြန်ကလစ်လုပ်ပါ..ကြော်ငြာအသစ်တွေအရေအတွက်များများနဲ့ထုတ်ပေးတာတွေ့ရပါတယ်။ အိုကေ..အခု
ကျနော်တို့ ကလစ်လို့ရလာတဲ့ငွေတွေက Main Balance ထဲကိုဘဲဝင်မှာပါ Mail Balance ထဲမှာ အနည်းဆုံး
$ 0.8000 လောက်ရလာပြီဆိုတာနဲ့ ရှယ်ယာ ၀ယ်တဲ့အဆင့်စပါတော့မယ်..မ၀ယ်ခင်အရင်ဆုံး Main Balance ထဲက
ရတဲ့ငွေတွေကို Rental Balance ထဲသို့ ပြောင်းပါမယ်..ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုရင် Rental Balance
ရဲ့ညာဘက်ပေါ်နားက [ Add Funds ] ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ … အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ။
အဲဒီမှာ ရွေးစရာသုံးခုထဲက Probux MAIN BALANCE ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ..ပီးရင်အောက်က ပုံကိုဆက်ကြည့်ပါ။
ပုံမှာ $ 0.10 ပြထားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်…အခု အပေါ်က ကျွန်တော် နမူနာ ပြတဲ့ ပုံမှာ ငွေက $ 0.1730 ဆိုတော့ $ 0.10 ထက်တော့ ကျော်နေ
ပါတယ်..ဒီတော့ အဲဒီ $ 0.10 ပမာဏလောက်ကိုဘဲRental Balance သို့ရွေ့လိုက်ပါမယ်။ ADD FUNDS ကိုသာနှိပ်
လိုက်ပါ.. ဒါဆိုရင်အောက်က ပုံအတိုင်း Main Balance ထဲက ငွေတွေက Rental Balance ထဲသို့ရောက်သွားတာ တွေ့
အစက $ 0.1730 ရှိတာ Main Balance ကနေ 0.10 $ ကို Rental Balance ထဲကိုရွေ့လိုက်တော့ ပုံမယ်မြင်တဲ့အတိုင်းပါ
ဘဲ..Main Balance မှာ $0.0730 ဘဲကျန်ပါတော့တယ်.. ကျန်တာက Rental Balance ထဲကိုရောက်သွားပါပြီ.. ဒီလိုနည်း
နဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ကလစ်ရင်း Main Balance ထဲမှာငွေတွေများလာတဲ့အခါ Rental Balance ထဲသို့ ရွေ့ပါ..အဲလိုလုပ်
လုပ်ရင်းနဲ့ Rental Balance ထဲမှာ အနည်းဆုံး $0.8000 လောက်ရဘီဆိုရင် ရှယ်ယာ ၀ယ်တဲ့အဆင့် စပါတော့မယ် .
အိုကေ..အောက်မယ်ပြထားတဲ့ ပုံထဲက Rent Referrals ဆိုတဲ့ အရုပ်လေးကို ကလစ်လိုက်ပါ။
ကလစ်လိုက်တာနဲ့ ရှယ်ယာ ၀ယ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်..အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ..
ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း ရှယ်ယာ3ခု 10 ခု 20 ခု 50 ခု 70 ခု 100 ခု ဆိုပြီးရှိပါတယ်.. ရှယ်ယာ 3ခုကို 0.6 ဒေါ်လာနဲ့
၀ယ်ရပါမယ် အဲဒါတွေကိုဘယ်ကရတဲ့ ငွေနဲ့ဝယ်မလဲဆိုရင် Main Balance ထဲကရတဲ့ငွေကို Rental Balance ထဲသို့
ရွေ့ထားတဲ့ ငွေတွေနဲ့ ၀ယ်ရမှာပါ..မိမိ စုလာတဲ့ငွေတွေက 0.8000 ရနေပြီဆိုတော့ ရှယ်ယာသုံးခုကို စ၀ယ်ပါမယ် ပုံ
မယ်ပြထားတာက ကျနော်စုနေတာ 0.8000 မပြည့်သေးတဲ့အတွက် ၀ယ်လို့မရသေးဘူး don’t have enough ဆိုပြီး
Error ပြနေတာပါ.. ဒါကို ခဏမေ့ထားပြီး 0.8000 ပြည့်တာနဲ့ ရှယ်ယာသုံးခုကို ၀ယ်လို့ရပြီဆိုပြီး ပြပါလိမ့်မယ်..၀ယ်
အိုကေ ရှယ်ယာသုံးခုဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ သုံးရက်လောက် ပုံမှန်အတိုင်း ကြော်ငြာတွေကို ကလစ်သွားပါ..ရတဲ့ပိုက်ဆံ
တွေကို Rental Balance ထဲသို့ဖြည့်ဖြည့်ထားပါ..သုံးရက်မြောက်ပီဆိုတာနဲ့ ပုံမှာပြထားတဲ့ Referral Clicks တွေ
Rented Referrals လေးကို ကလစ်လုပ်လိုက်ပါ..အောက်ပုံကိုကြည့်ပါ။
အဲဒီမှာ ကျနော်ဝယ်ထားတဲ့ ရှယ်ယာသုံးခုကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်.. ထိပ်ဆုံးက AutoPlay ကို Enabled ထားပေးပါ.
Avg ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ.. အဲဒီမှာ2နဲ့3က Avg 3.000 နဲ့ 2.500 အသီးသီးတက်နေကြသော်လည်း.. နံပတ် 1
မှာတော့ ဘားမှမတက်ပါ..အဲဒီအတွက် မြှားအစိမ်းအ၀ိုက်လေး ကိုနှိပ်ပြီး Recycle လုပ်ပေးလိုက်ပါ..ဒါဆိုရင်
နောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်ကျရင် Avg တက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်..
( သတိ => ရှယ်ယာဝယ်ပြီးတာနဲ့ Avg တက်မတက်ကို လေးရက်လောက်စောင့်ကြည့်ရပါမယ်..ချက်ချင်းမတက်ပါ..
လေးရက်လောက်စောင့်ကြည့်ပီးလို့ အခြားဟာတွေက Avg တက်သော်လည်း Avg မတက်တဲ့ ရှယ်ယာကိုသော်လည်း
ကောင်း.. Avg 2.000 ထက်မကျော်တဲ့ ကောင်တွေကို Recycle သာလုပ်ပစ်မှာ Avg0ကနေပြန်စပါလိမ့်စေ..)
အိုကေပြန်ဆက်ရအောင်…………အဲလိုကလစ်တွေတက်လာတာနဲ့အမျှ ကိုယ့်ရဲ့ Main Balance မှာရတဲ့
ငွေများဟာလည်း ပိုတိုးလာပါလိမ့်မယ်.. ဒီတော့ ကြော်ငြာကိုကလစ်ရင်းရတဲ့ငွေရော.. Referral Click ကနေရတဲ့ငွေရော နှစ်ခုပေါင်းပြီးရနေပြီပေါ့ဗျာ.. ကဲ..နှစ်ပတ်လောက် ကြော်ငြာတွေကိုကလစ်သွားပါ..ကလစ်သွားရင်းနဲ့ 2$ လောက်ရပြီ
ဆိုတာနဲ့ ရှယ်ယာ ဆယ်ခုဝယ်ပါ .. အဲလိုနဲ့ ငွေစုရင်း ရှယ်ယာတွေဝယ်နိုင်လေ ကိုယ်ရနေတဲ့ ငွေတွေဟာလဲ
တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ တစ်လနဲ့တစ်လမတူဘဲပိုပြီး များလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ.် .အကယ်လို့ မိမိမှာ $ 20 စုမိသွားပြီ
ဆိုတာနဲ့ ရှယ်ယာ အခု 100 ၀ယ်လိုက်ပါ.၀ယ်ပြီးရင်ကြော်ငြာတွေကိုကလစ်သွားပါ Avg တွေကို ဂရုတစ်စိုက်နဲ့ 2.000
ကျော်အောင် ဂရုစိုက်သွားပါ.မကျော်ရင် Recycle လုပ်ပစ်လိုက်ပါ..ဒီလိုနည်းနဲ့ ဂရုစိုက်သွားရင်း ရှယ်ယာ အခု 200 ပြည့်
တဲ့အထိ ၀ယ်ပါ.. 200 ပြည့်ပီဆိုတာနဲ့ လုံးဝ ရပ်ပစ်လိုက်ပါ.ဆက်မ၀ယ်ပါနဲ့တော့.. ဒီလိုနည်းနဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ပုံမှန်
အတိုင်း ကလစ်သွား..Avg တွေကိုထိန်းသွားရင်းနဲ့မိမိရတဲ့ငွေကို သတိထားကြည့်ပါ ငွေအရကြမ်းလာတာကို
တွေ့ရပါလိမ့်မယ်..  ကဲ..ရတဲ့ငွေတွေကို ထုတ်မပစ်နဲ့နော် ဒေါ်လာ 70$ ရပြီဆိုတာနဲ့ ကျနော်တို့ Gold Member
အဆင့်သို့ Upgrade လုပ်ပါမယ်.. ..။
ဒီနေရာမယ် ကျနော်နည်းနည်းရှင်းပြပါမယ် အခု ငွေရှာတဲ့ဆိုဒ်မှာအဆင့်သုံးဆင့်ရှိပါတယ် အခုကျနော်တို့လက်ရှိလုပ်နေ
တာက Standard Member အဆင့်ပါ.. Gold Member အဆင့်ရောက်ဖို့ ဒေါ်လာ 70 $ ရအောင်စုရပါ့မယ်..တစ်ချို့က
ကပ်သီးကပ်သတ်ပြန်မေးမယ် ဒေါ်လာ 70$ ကိုတန်းပေးလိုက်မယ်လေ… အဲလိုလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးမဟုတ်ပါဘူး.ရပါ
တယ.် .သို့ပေမယ့် ရှယ်ယာတွေဝယ်တဲ့အခါ ငွေအပြည့်မရဖြစ်ပါတယ.် နောက်တစ်ခုက ဒီလို ဆိုဒ်မျိုးတွေမယ်ပိုက်ဆံ
ရှာရာမှာဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ့်ပိုက်ဆံ အစစ်ကို ထုတ်မသုံးတာအကောင်းဆုံးပါ..:) ဒါကြောင့် သူပေးတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ဘဲ အဆင့်
ကဲGold Member ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လည်းအရင်က ထက်ပိုရလာတော့မှာသေချာပါတယ…် ရှယ်ယာတွေဆက၀် ယ်ပါ
800 -1000 လောက်အထိရှယ်ယာတေ၀ွ ယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ $780 ရအောင်ထပ်စုပြီး Ultimate ( အကန့်အသတ်မရှိ )
အဆင့်သို့ ထပ်မံ Upgrade လုပ်ပါ.. ဟုတ်ပီး Ultimate အဆင့်သို့ရောက်ပြီဆိုရင် ရှယ်ယာတွေကို 4000 ရတဲ့အထိ
၀ယ်ပါ..ပိုက်ဆံတွေကိုစုပါ.. ရှယ်ယာများလေကောင်းလေပါ.. အဲဒီ Ultimate အဆင့်မှာတော့ တစ်နေ့တစ်နေ့ကိုပိုက်
ဆံ တော်တော်လေးကိုဝင်နေပါပြီ…ရလာတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို ဒီအတိုင်းအလှကြည့်မနေနဲ့..သုံးလေးသိန်းရလာလိုက်
Cash Out လုပ်ပြီး Paypal ကနေတစ်ဆင့် ထုတ်ကြပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်.. ကဲအောက်မယ် Standard , Gold ,
Ultimate အဆင့်တွေမှာ ရှယ်ယာတွေဝယ်ရင်း ငွေရလာတဲ့ စနစ်ကို တွက်ပြထားပါတယ.် .တစ်ချက်လောက်လေ့လာ
200 Referrals x $0.005 x4Ads per day = $4.00 per day (earning from rental
ပြထားတဲ့အရဆိုရင်တော့ မက်လောက်စရာတွေပါ..ဒီလိုဖြစ်လာအောင်လည်း နှစ်နှစ်ကျော်လောက်တော့ အချိန်ပေးရမှာပါ
 ကဲ… အဆုံးသတ်ပါတော့မယ်နော်.. အဓိက ကျနော်မှာလိုတာက တစ်နေ့ကို နာရီဝက်လောက်လေး လုပ်လုပ်သွားရုံနဲ့
အချိန်ကြာလာရင်ဒီလိုတွေရလာမှာပါ အဓိကကတော့ စိတ်ရှည်ဖို့..ဇွဲရှိဖို့ပါဘ.ဲ .လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ နာရ၀ီ က်
လောက်ဆိုတာ ဘားမှမများပါဘူး..ပီးတော့ကိုယ်တိုင်လဲ ကလစ်စရာမလိုပါဘူး.Auto Click Bot စနစ်သုံးထားလို့ပါဘ.ဲ
တစ်ချို့ကတော့ ဒါတွေကိုအတုလို့ထင်မယ်..အတုပဲထားပါဦးတော့ ကိုယ့်အတွက်ဘားမှရင်းနှီးစရာမလိုတဲ့အရာ..ကိုယ့်
အင်တာနက်သုံးနေတဲ့အချိန်ထဲက နာရ၀ီ က်လောက်ပဲဖဲ့ပေးရတဲ့အရာပါ..ရတော့လဲအမြတ်မရတော့လဲ
အရှုံးမရ.ှိ .အင်တာနက်မှာ ဒီလို ရအောင်လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းတွေရှိနေပါလားဆိုပြီးတော့အသိစိတ်လေး ၀င်သွားစေ
ချင်တဲ့သဘောပါ.. က.ဲ .အားလုံးပ.ဲ .နည်းလမ်းကတော့ ဒီနေရာမယ်ပီးသွားပါပြ…ီ နားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ.် .
စာအုပ်ကိုဖတ်လိုက်..ငွေရှာတဲ့ဆိုဒ်ကိုလည်း ကလိလိုက်လုပ်ကြည့်ပါ နားလည်သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်..
မရှင်းလင်းတဲ့အချက်များ..အမှားများပါရင်လည်း ဆက်သွယ်အကြံပေးဝေဖန်နိုင်ပါတယ…် ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ
ဒီလုပ်ငန်းစဉ်လေးကို စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်…အဲဒီအတွက် ကျနော်နဲ့အတူတူ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအနေဖြင့်
လုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါတယ်..တစ်ခုခု Error တွေ့ရင်အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ဖြေရှင်ချက်များ..နည်းလမ်းများကိုပြောပြပေးသွား
မှတ်ချက် MM It Helper မှ ပြုလုပ်ထားသော pdf စာအုပ်ကို ကိုးကား၍ ပြန်ရေးသည် ။
ကိုယ်တိုင်လဲ စက်နှစ်လုံးနှင့် အကောက် နှစ်ခု ဖောက်ပြီး ပြုလုပ်ပြီးမှ ပြန်လည် ဝေမျှခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by Pyaephyo Nyeinchan
Huawei Y300-0000 Firmware Update Step2Failed Err...
Huawei G606 T00 Step2Fail အတွက် Firmware
C8815 Step 1 - Step2Fail
Huawei T8951 Step2Fail error fix
g610-U00 step2fail error
U8825D Step2Fail error fix
G730_U00 Step2Fail Fix Dload File
P6-C00 Step2Fail error fix
မင်္ဂလာပါ... ကျန်တော်တို့HUAWEI G520 (500) ...
Disk Defragmenter for phone
Facebook Virsion 10.12 Last virsion
18 Game For (18+)
Network Lock ဖြစ်တာဖြည်ဖို့ အထောက်အပံ့ရအောင် Ne...
English Speaking App:(အင်္ဂလိပ် စကားပြော Apk)
ဒါလေးကတော့ စာအုပ်လေးပါ၊ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်အတွက် သိသင်...
Posting post in facebook
APK icon view in PC
Pocket apk ယောက်ျားလေးတွေတွက်ပဲနော်.ဟီးး(ဖုန်းဂိမ်...
probux မှာကြော်ငြာကလစ်ပြီး ငွေရှာကြရအောင်
ဆိုဒ်5ခုကိုနေ့စဉ်ကလစ်ပြီး 1 ဒေါ်လာရယူလိုက်ပါ
. ojooo မှာငွေရှာနည်း guide
nerdbux မှာငွေရှာနည်း guide
goldenclix မှာငွေရှာနည်း guide
12. bucks24/7 မှာငွေရှာနည်း guide
14. PTC ဆိုဒ်တွေမှာ 1 လကို ဒေါ်လာ 50 နဲ့အထက်ရနိုင်မ...
မောက်စ် လေးကို နှိုပ်ခြင်းဖြင့် PTC Site တွေမှာငွေ ...
13. refbackbank ကိုအခြေခံပြီး ငွေရှာနည်း guide
Online မှာ ငွေရှာနည်းများ
အွန်လိုင်းမှာ ငွေရှာနည်း တစ်မျိုး
Online ပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်ရင် ငွေရှာနည်းစာအုပ်လေးဖြစ်...
တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ သန်းချီရှိသော ကြော်ငြာ Website...
အွန်လှိုင်း ငွေရှာနည်း (၁)
G730-U00 အတွက် မြန်မာဖောင့်
Huawei C8816D root
ှုIphone Ringtons crazy
ဆရာတော် အရှင်ဦးတေဇောသာရ ဟေားကြားတော်မှုသော"အရိမေတ္တ...
Huawei Ascend C8816 Official Firmware B176
Huawei C8825D (G330C) Official Firmware B968
Huawei G610 Firmware များ စုစည်းမှု
Huawei Ascend G730 Firmware ( Jan 2014 )
Huawei Ascend G610-U00 B910 Official Firmware
Huawei G730-U00 Official Firmware B132
Huawei C8813DQ Official Firmwares B013
Huawei Ascend P6S-U06 Official Firmware B124
Huawei Y535-C00 Official Firmware B131
Huawei G750-T00 ( Huawei Glory 3X ) B127
Huawei Ascend Y320-U01 Official Firmware B500
Huawei Ascend G730-U00 Official Firmware B135
Huawei Ascend G730-T00 Official Firmware B135
Huawei Ascend C8816D Official Firmware B180
HUAWEI Honor2 Ascend G615 (U9508 ) Firmware
Huawei U8815 အတွက် 4.2.1 Custom Firmware
Huawei G730 MM font APK
Huawei Ascend G500 Pro U8836D Custom ROM 4.0.4
Huawei U-8110 v2.1 Official Firmware B239 2C
Huawei Acsend G330D Official Firmware
Huawei Acsend U8825D Official Firmware
Y210-0010 Official Firmware B829
U8685D Official Firmware B829
Huawei U8661 v2.3.6 Official Firmware B832
Huawei U8100 v2.1 Official Firmware B251
Android Version 4.1x နှင့်အထက်တွင်မြန်မာစာမှန်ကန်ြ...
မြန်မာစာ အမှန်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်
Aircraft Pro Live Wallpapers v1.0 APK 13MB
3D Windows7Themes For Pc (3.21MB)